၂၀၂၀ ဆေးပညာရပ် တိုးတက်မှု
၂၀၂၀ ထဲမှာ အင်္ဂါဂြိုဟ်စူးစမ်းမှု အပါအဝင် အာကာသနည်းပညာတွေ၊ AI နည်းပညာတွေ တိုးတက်မှုရှိတဲ့ အပြင် တကမ္ဘာလုံးခံစားနေရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် အချိန်တိုအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထုတ်နိုင်တဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထူးခြားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ နာဆာ သိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာပဒေသာတင်က ပြောပါတယ်။
၂၀၂၀ ထဲမှာ အင်္ဂါဂြိုဟ်စူးစမ်းမှု အပါအဝင် အာကာသနည်းပညာတွေ၊ AI နည်းပညာတွေ တိုးတက်မှုရှိတဲ့ အပြင် တကမ္ဘာလုံးခံစားနေရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက်အချိန်တိုအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထုတ်နိုင်တဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထူးခြားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ နာဆာ သိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာပဒေသာတင်က ပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ဒီကပ်ရောဂါကာကွယ်ဖို့ အတွက် ဆေးသုတေသနကို အတင်းစိုင်းပြင်းပြီး လုပ်ကြပါတယ်။ ဒါ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာပါပဲ။ ကိုရီးယားမှာရော၊ ဂျပန်မှာရော၊ အိန္ဒိယမှာ၊ ဒီနိုင်ငံမှာ အင်ဂလန်မှာ အဲဒီလို ဝိုင်းပြီး လုပ်ကြပါတယ်။ ဒီကာကွယ်ဆေး ထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့ ထဲက အဓိကက ၃ - ၄ မျိုးလောက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲက တနည်းက ဗီဇမျိုးရိုးဆဲလ်ကို ပြောင်းလဲပြီး လူကိုယ်ထဲက antibody ကိုယ်ခံအားတွေ အများကြီး ထုတ်လာဖို့ လုပ်တဲ့ဟာ။ အဲဒီနည်းက ဓါတုဗေဒ နိုဘဲလ်ဆု ရတဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ပြင်သစ်က အမျိုးသမီး ၂ ယောက် Emmanuelle Charpentier နဲ့ Jennifer Doudna ။ သူတို့စတွေ့တာ။
- CRISPR မျိုးဗီဇ တည်ဖြတ်မှုနည်းသစ် gene editing နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အောင်မြင်မှု အတွက် သူတို့ကို နိုဘဲလ်ဆုပေးလိုက်တာပါ။ အဲဒီဟာကို အခြေခံပြီးတော့ ဗီဇတည်းဖြတ်မှုနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးရိုးဗီဇ DNA ကိုပုံစံတမျိုး သွင်းပေးလိုက်တယ်။ ကိုဗစ် ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ပုံစံအတိုင်း အတိအကျကို ရှာနိုင်တဲ့ mRNA ပေါ့နော်၊ သူ့ရဲ့ DNA ရဲ့ မိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ ribonucleic acid RNA ကို ဒီဇိုင်းလုပ်ပြီး ထည့်ပေးလိုက်တာ။ ထည့်ပေးလိုက်တာကနေ ကိုယ်ခံအား ထွက်လာအောင် လုပ်ပေးတယ်။ ကိုဗစ် ၁၉ သုတေသန နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဟာမှာ တိုးတက်မှု တခုပါ။ ဒါဟာ တကယ့်အောင်မြင်မှုပါ။”
မေး။.။“ဒီ မျိုးဗီဇတည်းဖြတ်တဲ့ နည်းပညာသစ် ကြောင့် ရောဂါပိုးကာကွယ်ဆေးထုတ်ရာမှာ အရင်လို နှစ်နဲ့ချီမကြာတော့ပဲ တနှစ်မပြည့်ခင်မှာ ထုတ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗီဇဆဲလ်ကို ခန္ဓာကိုယ် ပြင်ပမှာ ပွါးယူနိုင်တဲ့ နည်းတွေ့ခဲ့တာကလည်း ထူးခြားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ ဇီဝ သုတေသန အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဥပမာ လူ့ကိုယ်အတွင်းမှာ မဟုတ်ပဲနဲ့ ဗီဇဆဲလ်ကို အပြင်မှာ ပွါးယူလို့ရတဲ့ သုတေသနကို ဒီနှစ် အောင်မြင်စွာ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သက်ရှိ ဆဲလ်တွေ ထဲမှာ သက်ရှိ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ပွါးယူရတာပါ။ အခုက အပြင်မှာ ဓါတုဗေဒ နည်းအရ ဖေါ်ပြီးတော့မှာ ပွါးယူလို့ ရတဲ့ နည်းကို စတွေ့တာပါ။ ဒါအောင်မြင်မှုကြီး တခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်”
မေး။။“မျက်စိနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တီထွင်မှုနည်းပညာတွေထဲမှာတော့ ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်မှုက ၂ ခုရှိပါတယ်။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။.။“မွေးကတည်းက မျက်လုံးကွယ်နေတဲ့ လူတွေ အတွက် သုတေသနလည်းပါပါတယ်။ ပကတိ မျက်လုံးက လုံးဝ မမြင်ရတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ သူက မျက်မှန် တပ်လိုက်ရတယ်။ မျက်မှန်မှာ ကင်မရာလေး တပ်ပေးထားပြီးတော့ အဲဒီ ကင်မရာ မြင်လွှာကနေ. ဦးနှောက်ထဲကို လျှပ်စစ် ကလေးတွေနဲ့ သွားပြီးတော့ stimulate လုပ်ပေးတာ မျိုးလိုပဲ မျက်မှန် ကင်မရာကနေ ရိုက်လိုက်တဲ့ ရုပ်လွှာကို လျှပ်စစ်ဓါတ် ပြောင်းပြီး ဦးနှောက်ထဲမှာ မျက်လုံး ရုပ်သဘဝကို မြင်ရတဲ့ မျက်ကြည်ဓါတ်ကို သွားပြီး နှိုးဆွပြီးတော့မှ ပုံရိပ်မြင်အောင် လုပ်လို့ ရပါပြီ။ အဲဒါ အရေးပါတဲ့ အောင်မြင်မှု တခုပါ။”
နောက်သုတေသနလုပ်တဲ့ ထဲမှာ မျက်ကပ်မှန်ကနေ အဝေးရော အနီးရောကို သူ့ဟာသူ အလိုလို adjust လုပ်ပေး ချိန်ပေးပြီး မှန်ဘီလူး အားကို ချဲ့လိုက် လျှော့လိုက် လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ်လာပြီ။
ဒီ့ထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက ဥပမာ မိန့်ခွန်းပြောတဲ့ အခါ ပြောတဲ့ သူက သူပြောမယ့် စာကို မြင်အောင် အောက်ကို ကြည့် ရမယ့် အစား သူတပ်ထားတဲ့ မျက်ကပ်မှန်မှာ ကွန်ပြူတာ screen မျက်နှာပြင်လို ဟာမျိုး အလိုလို ပေါ်လာမယ်။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ စာလုံးတွေ ကိုယ်မှတ်ထားတာတွေက အကုန်ပေါ်လာမယ်။ အဲဒါက Double vision လို ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ မျက်ကပ်မှန်မှာ အလွှာတွေ အများကြီး ထည့်ပြီး ပြောနေသူက မြင်နေရချိန်မှာပဲ မိန့်ခွန်း ပြောနေတဲ့ သူကပဲ သူပြောချင်တာတွေကို မျက်လုံး ပေါ်မှာ အလိုလို ပေါ်လာအောင် လုပ်ပေးလို့ ရတဲ့နည်းပညာပါ။”
မေး။ .။“၂၀၂၀ အတွင်း ထူးခြားတဲ့ တီထွင်မှု နောက်တခုကတော့ ဇီဝအပ်ချည် ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. “ဆေးပညာရပ်မှာ ခွဲစိတ်ကုသတဲ့အခါ၊ ဒဏ်ရာရတဲ့အခါတွေမှာ အသားကို ပြန်ချုပ်ရတယ်။ မြင်းမြှီးနဲ့ ချုပ်တာ၊ ကော်ကပ်တာတို့နဲ့ အသားကို ပြန်စိအောင် လုပ်ရတယ်။ အခု လူ့ရဲ့ အရေပြား - အရေခွံက ဆဲလ်တွေကနေ အပ်ချည် တမျိုးထုတ်လိုက်တယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကနေ ထုတ်တဲ့ အရေခွံကနေထုတ်တဲ့ အပ်ချည်ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြန်ချုပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ အနာကျက်တာ မြန်ပါတယ်။ ဒါကို biological yarn လို့ ခေါ်တယ်။ ဇီဝ အပ်ချည် အဲဒါကို ဒီနှစ်ထဲမှာ ထွင်တာပါ။”
မေး။.။“နောက် အောင်မြင်မှု တခုကတော့ အာဖရိကဖား African clawed frog (Xenopus Laevis)
ကနေ ထုတ်တဲ့ xenobots လို့ခေါ်တဲ့ သက်ရှိစက်ရုပ် ဖန်တီးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“သက်ရှိစက်ရုပ် လို့ ခေါ်ရမှာ ပေါ့နော်။ ဇီဝနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ xenobot လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Xenobot က ရိုးရိုး စက်ရုပ် မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ သူက ဆဲလ်တွေကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ပုံစံရအောင် လုပ်ပြီး ဒီဆဲလ် ကပဲ မလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းကို ဖယ်ပေးဖို့၊ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းကို ဓါတုပစ္စည်းအရ ပြောင်းလဲဖို့ အဲဒါအတွက် ဒီဇိုင်းလုပ်တာပါ။ အဲဒီလိုလုပ်တဲ့အခါ စူပါ ကွန်ပြူတာနဲ့ ။ ကျနော်တို့ ရိုးရိုး ကွန်ပြူတာနဲ့မတူဘူး။ တစက္ကန့်ကို အကြိမ်ပေါင်း သိန်း သန်း ကုဋေ လောက် ညွှန်ကြားမှုတွေကို တွက်ချက်နိုင်တဲ့ စက်နဲ့ သူတို့က model ဒီဇို်င်း လုပ်ပါတယ်။ ဆဲလ် အမျိုးစုံ လုပ်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ဆေးကုခိုင်းလိုက်တယ်။ ရှာခိုင်းလိုက်တယ်။ အာဖရိကတိုက်မှာ ရှိတဲ့ ဖားတမျိုးရဲ့ ဆဲလ်ကို ဒီဇိုင်းလုပ်ပြီး သုတေသနလုပ်တာပါ။
ဒီသုတေသန အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အတွက် အတော် အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေပါတယ်။ ဥပမာ အနုမြူ ဓါတ်ရောင်ခြည် သက်ရောက်နေတာ ဘယ်နေရာ ဆိုတာသိချင်ရင် ဆဲလ် တွေကို မွေးပြီး ရှာခိုင်းလို့ ရမယ် ဆိုရင် ချက်ချင်း အသုံးချနိုင်တယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခုက သမုဒ္ဒရာတွေထဲ ရောက်ကုန်တဲ့ ပလပ်စတစ် အပိုင်းအစတွေ ပြဿနာပါ။ အဲဒီ အပိုင်းအစတွေဟာ သမုဒ္ဒရာ တပြင်လုံးမှာ ပြန့်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအမှိုက်တွေကို ရှင်းဖို့ ခုနလို ဆဲလ်တွေကို အများကြီး မွေးထုတ်လိုက်ပြီး ပင်လယ်ပြင်မှာ ဖြန့်၊ အဲဒီမိုက်ခရို ပလပ်စတစ် အမှိုက်တွေကို ပြန်သိမ်းမယ့် နည်းစလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါပြီ။
နောက်တခုက လူ့ကိုယ်ထဲမှာ သွေးကြောပိတ်တယ် ဆိုရင် ဒီသွေးကြောထဲကို xenobot စက်ရုပ်ကို ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ သွေးကြော ပိတ်နေတဲ့ နေရာ ရောက်ရင် ပိတ်နေတဲ့ အဆီကို သူက တဖြေးဖြေး ဖယ်ယူမယ့် နည်း ကို သုတေသန လုပ်နေပါပြီ။”
မေး။.။“နောက်တခုက လူ့ခ္ဓာကိုယ်တွင်း အစိတ်အပိုင်းတွေကို အထင်းသား မြင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်ပိုင်းရဲ့ ယိုယွင်းမှုကို အတိအကျ သိနိုင်ဖို့ အတွက် transparent organဆိုတာကို ထွင်နိုင်တာပါ။ ဥပမာ ဦးနှောက် အတွက် ဆိုရင် ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းက ဘယ်လိုပုံစံရှိနေလဲ ဆိုတာကို ရိုးရိုး အိပ်စရေးနဲ့ ရိုက်လို့ မရတဲ့အတွက် လေဆာရောင်ခြည် နည်းပညာ၊ ကွန်ပြူတာနည်းပညာနဲ့ ဒီရောဂါ ဖြစ်နေတဲ့ ဦးနှောက်တို့ ကျောက်ကပ်တို့ကို ၃ ဖက်မြင် အကုန်လုံး ကြည့်လို့ရအောင် လုပ်တဲ့စက်ကို သူတို့ ထွင်နိုင်တာပါ။”
၂၀၂၀ ထဲမှာ အင်ျဂါဂွိုဟျစူးစမျးမှု အပါအဝငျ အာကာသနညျးပညာတှေ၊ AI နညျးပညာတှေ တိုးတကျမှုရှိတဲ့ အပွငျ တကမ်ဘာလုံးခံစားနရေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအတှကျအခြိနျတိုအတှငျး ကာကှယျဆေးထုတျနိုငျတဲ့ ဆေးဘကျဆိုငျရာ ထူးခွားတဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရှိခဲ့တယျလို့ နာဆာ သိပ်ပံပညာရှငျ ဒေါကျတာပဒသောတငျက ပွောပါတယျ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ဒီကပျရောဂါကာကှယျဖို့ အတှကျ ဆေးသုတသေနကို အတငျးစိုငျးပွငျးပွီး လုပျကွပါတယျ။ ဒါ ကမ်ဘာတဝှမျးမှာပါပဲ။ ကိုရီးယားမှာရော၊ ဂပြနျမှာရော၊ အိန်ဒိယမှာ၊ ဒီနိုငျငံမှာ အငျဂလနျမှာ အဲဒီလို ဝိုငျးပွီး လုပျကွပါတယျ။ ဒီကာကှယျဆေး ထုတျဖို့လုပျတဲ့ ထဲက အဓိကက ၃ - ၄ မြိုးလောကျ ရှိပါတယျ။ အဲဒီအထဲက တနညျးက ဗီဇမြိုးရိုးဆဲလျကို ပွောငျးလဲပွီး လူကိုယျထဲက antibody ကိုယျခံအားတှေ အမြားကွီး ထုတျလာဖို့ လုပျတဲ့ဟာ။ အဲဒီနညျးက ဓါတုဗဒေ နိုဘဲလျဆု ရတဲ့ အမရေိကနျနဲ့ ပွငျသဈက အမြိုးသမီး ၂ ယောကျ ။ Emmanuelle Charpentier နဲ့ Jennifer Doudna သူတို့စတှတေ့ာ။
- CRISPR မြိုးဗီဇ တညျဖွတျမှုနညျးသဈ gene editing နဲ့ ပတျသကျတဲ့ အောငျမွငျမှု အတှကျ သူတို့ကို နိုဘဲလျဆုပေးလိုကျတာပါ။ အဲဒီဟာကို အခွခေံပွီးတော့ ဗီဇတညျးဖွတျမှုနဲ့ ဗိုငျးရပျဈ မြိုးရိုးဗီဇ DNA ကိုပုံစံတမြိုး သှငျးပေးလိုကျတယျ။ ကိုဗဈ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ ပုံစံအတိုငျး အတိအကကြို ရှာနိုငျတဲ့ mRNA ပေါ့နျော၊ သူ့ရဲ့ DNA ရဲ့ မိတျဖကျဖွဈတဲ့ ribonucleic acid RNA ကို ဒီဇိုငျးလုပျပွီး ထညျ့ပေးလိုကျတာ။ ထညျ့ပေးလိုကျတာကနေ ကိုယျခံအား ထှကျလာအောငျ လုပျပေးတယျ။ ကိုဗဈ ၁၉ သုတသေန နဲ့ပတျသကျတဲ့ ဟာမှာ တိုးတကျမှု တခုပါ။ ဒါဟာ တကယျ့အောငျမွငျမှုပါ။”
မေး။.။“ဒီ မြိုးဗီဇတညျးဖွတျတဲ့ နညျးပညာသဈ ကွောငျ့ ရောဂါပိုးကာကှယျဆေးထုတျရာမှာ အရငျလို နှဈနဲ့ခြီမကွာတော့ပဲ တနှဈမပွညျ့ခငျမှာ ထုတျနိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဗီဇဆဲလျကို ခန်ဓာကိုယျ ပွငျပမှာ ပှါးယူနိုငျတဲ့ နညျးတှခေဲ့တာကလညျး ထူးခွားတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ ဇီဝ သုတသေန အောငျမွငျမှုတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ဥပမာ လူ့ကိုယျအတှငျးမှာ မဟုတျပဲနဲ့ ဗီဇဆဲလျကို အပွငျမှာ ပှါးယူလို့ရတဲ့ သုတသေနကို ဒီနှဈ အောငျမွငျစှာ လုပျလို့ ရပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ သကျရှိ ဆဲလျတှေ ထဲမှာ သကျရှိ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ပှါးယူရတာပါ။ အခုက အပွငျမှာ ဓါတုဗဒေ နညျးအရ ဖျေါပွီးတော့မှာ ပှါးယူလို့ ရတဲ့ နညျးကို စတှတေ့ာပါ။ ဒါအောငျမွငျမှုကွီး တခုလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ”
မေး။။“မကျြစိနဲ့ ပတျသကျတဲ့ တီထှငျမှုနညျးပညာတှထေဲမှာတော့ ထူးထူးခွားခွား အောငျမွငျမှုက ၂ ခုရှိပါတယျ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။.။“မှေးကတညျးက မကျြလုံးကှယျနတေဲ့ လူတှေ အတှကျ သုတသေနလညျးပါပါတယျ။ ပကတိ မကျြလုံးက လုံးဝ မမွငျရတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ သူက မကျြမှနျ တပျလိုကျရတယျ။ မကျြမှနျမှာ ကငျမရာလေး တပျပေးထားပွီးတော့ အဲဒီ ကငျမရာ မွငျလှာကနေ. ဦးနှောကျထဲကို လြှပျစဈ ကလေးတှနေဲ့ သှားပွီးတော့ stimulate လုပျပေးတာ မြိုးလိုပဲ မကျြမှနျ ကငျမရာကနေ ရိုကျလိုကျတဲ့ ရုပျလှာကို လြှပျစဈဓါတျ ပွောငျးပွီး ဦးနှောကျထဲမှာ မကျြလုံး ရုပျသဘဝကို မွငျရတဲ့ မကျြကွညျဓါတျကို သှားပွီး နှိုးဆှပွီးတော့မှ ပုံရိပျမွငျအောငျ လုပျလို့ ရပါပွီ။ အဲဒါ အရေးပါတဲ့ အောငျမွငျမှု တခုပါ။”
နောကျသုတသေနလုပျတဲ့ ထဲမှာ မကျြကပျမှနျကနေ အဝေးရော အနီးရောကို သူ့ဟာသူ အလိုလို adjust လုပျပေး ခြိနျပေးပွီး မှနျဘီလူး အားကို ခြဲ့လိုကျ လေြှာ့လိုကျ လုပျလို့ရတဲ့ဟာပျေါလာပွီ။
ဒီ့ထကျပိုပွီး စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးတာက ဥပမာ မိနျ့ခှနျးပွောတဲ့ အခါ ပွောတဲ့ သူက သူပွောမယျ့ စာကို မွငျအောငျ အောကျကို ကွညျ့ ရမယျ့ အစား သူတပျထားတဲ့ မကျြကပျမှနျမှာ ကှနျပွူတာ screen မကျြနှာပွငျလို ဟာမြိုး အလိုလို ပျေါလာမယျ။ ကိုယျပွောခငျြတဲ့ စာလုံးတှေ ကိုယျမှတျထားတာတှကေ အကုနျပျေါလာမယျ။ အဲဒါက Double vision လို ဖွဈသှားတယျ။ အဲဒီတော့ မကျြကပျမှနျမှာ အလှာတှေ အမြားကွီး ထညျ့ပွီး ပွောနသေူက မွငျနရေခြိနျမှာပဲ မိနျ့ခှနျး ပွောနတေဲ့ သူကပဲ သူပွောခငျြတာတှကေို မကျြလုံး ပျေါမှာ အလိုလို ပျေါလာအောငျ လုပျပေးလို့ ရတဲ့နညျးပညာပါ။”
မေး။ .။“၂၀၂၀ အတှငျး ထူးခွားတဲ့ တီထှငျမှု နောကျတခုကတော့ ဇီဝအပျခညျြ ထုတျနိုငျခဲ့တာပါ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. “ဆေးပညာရပျမှာ ခှဲစိတျကုသတဲ့အခါ၊ ဒဏျရာရတဲ့အခါတှမှော အသားကို ပွနျခြုပျရတယျ။ မွငျးမွှီးနဲ့ ခြုပျတာ၊ ကျောကပျတာတို့နဲ့ အသားကို ပွနျစိအောငျ လုပျရတယျ။ အခု လူ့ရဲ့ အရပွေား - အရခှေံက ဆဲလျတှကေနေ အပျခညျြ တမြိုးထုတျလိုကျတယျ။ လူ့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးကနေ ထုတျတဲ့ အရခှေံကနထေုတျတဲ့ အပျခညျြဖွဈတဲ့အတှကျ ပွနျခြုပျလိုကျတဲ့ အခါမှာ အနာကကျြတာ မွနျပါတယျ။ ဒါကို biological yarn လို့ ချေါတယျ။ ဇီဝ အပျခညျြ အဲဒါကို ဒီနှဈထဲမှာ ထှငျတာပါ။”
မေး။.။“နောကျ အောငျမွငျမှု တခုကတော့ အာဖရိကဖား African clawed frog (Xenopus Laevis)
ကနေ ထုတျတဲ့ xenobots လို့ချေါတဲ့ သကျရှိစကျရုပျ ဖနျတီးနိုငျတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“သကျရှိစကျရုပျ လို့ ချေါရမှာ ပေါ့နျော။ ဇီဝနဲ့ လုပျထားတဲ့ xenobot လို့ ချေါပါတယျ။ Xenobot က ရိုးရိုး စကျရုပျ မဟုတျတော့ပဲနဲ့ သူက ဆဲလျတှကေို ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ဒီဇိုငျးနဲ့ ပုံစံရအောငျ လုပျပွီး ဒီဆဲလျ ကပဲ မလိုအပျတဲ့ ပစ်စညျးကို ဖယျပေးဖို့၊ လိုအပျတဲ့ ပစ်စညျးကို ဓါတုပစ်စညျးအရ ပွောငျးလဲဖို့ အဲဒါအတှကျ ဒီဇိုငျးလုပျတာပါ။ အဲဒီလိုလုပျတဲ့အခါ စူပါ ကှနျပွူတာနဲ့ ။ ကနြျောတို့ ရိုးရိုး ကှနျပွူတာနဲ့မတူဘူး။ တစက်ကနျ့ကို အကွိမျပေါငျး သိနျး သနျး ကုဋေ လောကျ ညှနျကွားမှုတှကေို တှကျခကျြနိုငျတဲ့ စကျနဲ့ သူတို့က model ဒီဇိုငျး လုပျပါတယျ။ ဆဲလျ အမြိုးစုံ လုပျကွညျ့တယျ။ ပွီးတော့ ဆေးကုခိုငျးလိုကျတယျ။ ရှာခိုငျးလိုကျတယျ။ အာဖရိကတိုကျမှာ ရှိတဲ့ ဖားတမြိုးရဲ့ ဆဲလျကို ဒီဇိုငျးလုပျပွီး သုတသေနလုပျတာပါ။
ဒီသုတသေန အောငျမွငျခဲ့တဲ့ အတှကျ အတျော အကြိုးဖွဈထှနျး စပေါတယျ။ ဥပမာ အနုမွူ ဓါတျရောငျခွညျ သကျရောကျနတော ဘယျနရော ဆိုတာသိခငျြရငျ ဆဲလျ တှကေို မှေးပွီး ရှာခိုငျးလို့ ရမယျ ဆိုရငျ ခကျြခငျြး အသုံးခနြိုငျတယျဆိုပွီး စဉျးစားတာမြိုးဖွဈပါတယျ။ နောကျတခုက သမုဒ်ဒရာတှထေဲ ရောကျကုနျတဲ့ ပလပျစတဈ အပိုငျးအစတှေ ပွဿနာပါ။ အဲဒီ အပိုငျးအစတှဟော သမုဒ်ဒရာ တပွငျလုံးမှာ ပွနျ့နတော ဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီအမှိုကျတှကေို ရှငျးဖို့ ခုနလို ဆဲလျတှကေို အမြားကွီး မှေးထုတျလိုကျပွီး ပငျလယျပွငျမှာ ဖွနျ့၊ အဲဒီမိုကျခရို ပလပျစတဈ အမှိုကျတှကေို ပွနျသိမျးမယျ့ နညျးစလုပျဖို့ ကွိုးစားနပေါပွီ။
နောကျတခုက လူ့ကိုယျထဲမှာ သှေးကွောပိတျတယျ ဆိုရငျ ဒီသှေးကွောထဲကို xenobot စကျရုပျကို ထညျ့ပေးလိုကျမယျ။ သှေးကွော ပိတျနတေဲ့ နရော ရောကျရငျ ပိတျနတေဲ့ အဆီကို သူက တဖွေးဖွေး ဖယျယူမယျ့ နညျး ကို သုတသေန လုပျနပေါပွီ။”
မေး။.။“နောကျတခုက လူ့ခ်ဓာကိုယျတှငျး အစိတျအပိုငျးတှကေို အထငျးသား မွငျအောငျ လုပျနိုငျခဲ့တာပါ။ ”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျပိုငျးရဲ့ ယိုယှငျးမှုကို အတိအကြ သိနိုငျဖို့ အတှကျ transparent organဆိုတာကို ထှငျနိုငျတာပါ။ ဥပမာ ဦးနှောကျ အတှကျ ဆိုရငျ ဦးနှောကျအစိတျအပိုငျးက ဘယျလိုပုံစံရှိနလေဲ ဆိုတာကို ရိုးရိုး အိပျစရေးနဲ့ ရိုကျလို့ မရတဲ့အတှကျ လဆောရောငျခွညျ နညျးပညာ၊ ကှနျပွူတာနညျးပညာနဲ့ ဒီရောဂါ ဖွဈနတေဲ့ ဦးနှောကျတို့ ကြောကျကပျတို့ကို ၃ ဖကျမွငျ အကုနျလုံး ကွညျ့လို့ရအောငျ လုပျတဲ့စကျကို သူတို့ ထှငျနိုငျတာပါ။”